အလင်းရောင်ကြယ်များ: March 2016
မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို လွှတ်တော်တွင် ဖွင့်ဟ
မကွေး၊ မတ် ၂၉ ။ ။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရထားသူ ပွင်ဖြူမြို့ မဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ်(၂)မှ ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုက ၎င်းပိုင်ဆိုင်မှုအား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် မတ်လ ၂၉ရက်က ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/29/2016 11:27:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
( ၅ ) နှစ် အတွင်း မှာ -
၁။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့ ( ၈ ) ဖွဲ့ နဲ့ NCA လက်မှတ် ထိုး နိုင်ခဲ့ တယ် ... ဒေါ်စု ဦးဆောင် တဲ့ ဦးထင်ကျော် အစိုးရ အဖွဲ့ က တနိုင် ငံ လုံး သေနတ် သံ တိတ် ပြီး ငြိမ်းချမ်း အောင် လုပ်ပေး နိူ်င် ရ မယ် ...
၂။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က သိန်း ၄၀ တန် / ၁၈ သိန်း တန် / ၁၅ သိန်းတန် Sim Card တွေ ကို ၁၅၀၀ ထဲ နဲ့ ရောင်းပေး နိုင်ခဲ့ ပြီး ဖုန်းခေါ် ဆိုခ တွေ ဈေးချ ပေး ခဲ့ တယ် .. ဒေါ်စု ဦးဆောင် တဲ့ ဦးထင်ကျော် အစိုး ရ အဖွဲ့ က Sim Card တွေ အလကား ပေးပြီး ဖုန်း ခေါ် ဆိုခ ကို အခု ထက် ဈေး လျှော့ ပေး နိုင်ရ မယ် ...
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/15/2016 09:57:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ် ပြောသော မှတ်သားစရာကောင်းစကားတစ်ခွန်း
လွတ်လပ်ရေးရပြီးထဲက ရွေးကောက်ပွဲက ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အစိုးရတစ်ခု က နောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနုိုင်ရတဲ့ အခြားပါတီတစ်ခုဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရကုို အေးအေးချမ်းချမ်း စနစ်တကျ တာဝန်လွှဲပေးတာမရှိခဲ့သေးပါဘူး။ အဲဒီအစဉ်အလာကို အခုကျွန်တော်တို့ စနုိုင်ပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် သမုိုင်းသစ်လို့ပြောတာပါ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/15/2016 09:50:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
နုိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းအပေါ် တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကုိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးချုပ် တင့်ဆန်းနိုင်၏ အမြင်
ဧရာဝတီ၊ မတ် ၁၅၊ ၂၀၁၆
"ဦးထင်ကျော်ကို ပြောရရင် ကျနော်တို့ ရွေးချယ်သလိုပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ကျနော်တို့ ရွေးချယ်တဲ့ ကျနော်တို့တင်တဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေ အငြိမ်းစားကိုလည်း သေချာ စိစစ်ပြီးမှ ရွေးတာပါ။ သင့်တော်လို့ တင်တာပါ။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကလည်း သင့်တော်လို့ တင်တာ ဖြစ်မှာပါ။ ကျနော်တို့က ဦးထင်ကျော်ကိုလည်း လက်ခံပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူကောင်းပဲ ဖြစ်မှာပါ။ လူကောင်းလူတော် ဖြစ်မှာပါ။ တခုပဲ သမ္မတ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိရဘူး။ သမ္မတ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အထွဋ်အထိပ်ပဲ။ သမ္မတဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အကြီးအကဲ။ အုပ်ချုပ်ရေး အကြီးအကဲပဲ။ ဒါက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမှာ ပါပြီးသား"
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/15/2016 09:48:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ၊ လေဆိပ်အဆောက်အအုံသစ်ကို မတ်လ ၁၂ ရက် တွင် ဖွင့်လှစ်မည် ------ ------
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ၊လေဆိပ်အဆောက်အအုံသစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို မတ်လ ၁၂ ရက်တွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး လတ်တလောတွင် ဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ရန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/10/2016 07:36:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဦးထင်ကျော် ကို NLD ကဒုတိယ သမ္မတလောင်းအဖြစ်တင်မြှောက်
Presidency beckons for Suu Kyi confidant after two months in party - Reuters
ReutersPresidency beckons for Suu Kyi confidant after two months in partyReutersYANGON Until two months ago, Htin Kyaw was not evenamember of Aung San Suu Kyi&#39;s National League for Democracy (NLD). Now, he is the favored presidential candidate of Myanmar&#39;s rul...
maxthon update browser မှ
ဆက်လက်၍ မြန်မာ သတင်းတစ်ခုမှ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/10/2016 07:32:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အလင်းရောင်ကြယ်များဘလောက်ဂါရေးသော ငွေမကုန် ကျမ္မာရေးနည်းတစ်ခု
ကိုင်း ဒီဘလောက်ကို ရေးနေသော မိတ်ဆွေတို့ မြင်ဘူးခြင်နေတဲ့ (အလင်းရောင်ကြယ်များ}ပိုင်ရှင်ပါပဲ။
ဒီဆေးနည်းက ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားနည်းနဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျနေတာရယ်။
နောက်ပြီး ဦးပေါက်ကျော် ဆိုသော ဆေးဆရာပြောသော စကားနှင့်လည်း
ကိုက်ညီနေလို့ လက်တွေ့စကားလည်းဖြစ်နေလို့ ငွေမကုန် ကျမ္မာရေး
ဒီနေ့၅ကျမ်းပြန်ကျောင်းက စာကြည့်တိုက်မှုး ဆရာ ရဟန်းဆီသွားရင်း ၊
စာကြည့်တိုက် အပေါ်ဝရံတာက အသက် ၇၀ နီးပါး ယောဂီဝတ် အမေအိုကြီး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/07/2016 09:55:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လေယာဉ်ပျက်ကျခဲ့ရင် ခရီးသည်တင်ခန်းတစ်ခုလုံးကို ဖြုတ်ချနိုင်တော့မယ့် နည်းပညာကို တီထွင် ...
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/07/2016 09:42:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပါရီ၊ မတ် ၅ ။ ။ မြင့်မားသည့် တန်ခိုးသိဒ္ဓိများ ရရှိရေးအတွက် အပျိုစင်တစ်ထောင်နှင့် လိင်ဆက်ဆံရရန် အားထုတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ယောဂဂုရုအား ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့တွင် ဖမ်းမိသည်။
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံမှ ယောဂဆရာဖြစ်သူ အသက် ၆၄ နှစ်ရှိ ဂရီဂေါရီယန်းဘိုင်ဗိုလာရုဆိုသူသည် အသက်မပြည့်သေးသော မိန်းကလေးနှင့် လိင်ဆက်ဆံမှုဖြင့် ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံအတွင်း စစ်ဆေးခံရစဉ် ၂၀၀၄ ခုနှစ်က တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအား ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံက ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အဆိုပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/05/2016 07:18:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မွန်းလွဲပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးအမြောက်အများဖမ်းဆီးရမိခဲ့မှု ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမူးယစ်အထူးတပ်ဖွဲ့ရုံးမှာ လူ ၃ ဦး ကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/05/2016 07:10:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၂၀၁၆ခုနှစ်၃လပိုင်း၅ရက်နေ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အာ ပြည်သူများမှးနုတ်ဆက်ပွဲ အမှတ်တရပုံရိပ်များ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 3/05/2016 07:08:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ် ပြောသော မှတ်သားစရာကော...
နုိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံ...
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ၊ လေဆိပ်အဆောက်အအုံသစ...
ဦးထင်ကျော် ကို NLD ကဒုတိယ သမ္မတလောင်းအဖြစ်တင်မြှော...
အလင်းရောင်ကြယ်များဘလောက်ဂါရေးသော ငွေမကုန် ကျမ္မာရေး...
လေယာဉ်ပျက်ကျခဲ့ရင် ခရီးသည်တင်ခန်းတစ်ခုလုံးကို ဖြုတ...
စိတ်တန်ခိုးသိဒ္ဓိကြီးထွားရေးအတွက် အပျိုစင် ၁၀၀၀ နှင...
၂၀၁၆ခုနှစ်၃လပိုင်း၅ရက်နေ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသ...